Athis Fanantenana – Mandehàna any amin’izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra [Marka 16 :15]
Alahady 10 jolay 2022 manomboka amin'ny 4 ora hariva (an-tsipirihany...)
Zoma 15 jolay 2022 amin'ny 8 ora sy sasany alina (an-tsipirihany...)
Alahady 10 jolay amin'ny 2 ora sy 45min hariva (an-tsipirihany...)
ZAIKABE 2022 - FAFAN
Sabotsy 3 sy Alahady 4 septambra 2022 (an-tsipirihany...)
Toriteny sy 5mn Sekoly Alahady ...
Ny vaovao voaray farany ...
Miarahaba sy mirary soa ary misaotra anao mpamaky, amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Tompontsika,mandray sy mampiantrano ny Tranon-kalan’ny Fiangonana FPMA Athis-Fanantenana.
Ny Fiangonana Fpma Athis-Fanantenana, dia fiangonana mino sy manaiky ary mampianatra fa Jesoa Kristy, Zanak’Andriamanitra velona no Tompo sy Mpamonjy ; ary ny Tenin’Andriamanitra voasoratra ao amin’ny Baiboly no fototra iorenan’izany finoana sy ny fampianarana izany.
Ny zava-kendrena dia ny fampielezana ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy, ny fanabeazana sy fampiorenana amin’ny finoana sy ny fiainana kristianina ary ny fijoroana ho vavolombelon’ny fahamarinan’Andriamanitra amin’ny teny sy fiainana ary ny asa.
Ny Tranon-kala dia fitaovana ampiasaina amin’izany asa fijoroana vavolombelona izany sy ny fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra. Natao ihany koa ho fampahalalam-baovao sy fifaneraserana ary fifanakalozana eo amin’ny samy kiristiana ato amin’ny sahan’ny Fpma sy ny any ivelany.
Koa dia manasa sy mampirisika anao amim-panajana mba hazoto hitsidika sy hamaky ireo lahatsoratra ato amin’ ity Tranon-kala ity. Fidio sy vakio ary ampahafantaro ny hafa koa ity Tranon-kala ity hamonto ny tokantrano samy hafa amin’ny Tenin’Andriamanitra izay hita ao anatiny, ho tany lonaka hamokatra voa tsara ho an’i Kristy.
Ny Departemantan’ny Serasera
MOFON’AINA ALAROBIA 6 JOLAY 2022
Fankatoavana, Fiambenana, Fitiavana
MOFON’AINA TALATA 5 JOLAY 2022
8 Place de l'église, 91200 Athis-mons
Alahady @ 4 ora hariva
10 jolay 2022
15 jolay 2022
Krismasy 2021 (8)
RRSTK Poitiers 2021 (3)
Rencontre fraternelle TILY (23 février 2020) (29)
Fisoratana anarana (tohiny) ...
Fanolorana ho amin'ny Batisa (taratasy fenoina...)